Asusu Igbo : A mịpụla ego ọzọ n’akpa NLNG – Sineti. - ENTER NIGERIA
Asusu Igbo : A mịpụla ego ọzọ n’akpa NLNG – Sineti.
Ụlọomeiwu ukwu bụ Sineti ekwuola na ha achọpụtala ego dị otu ijeri dọla ndị ụlọọrụ NNPC mịpụrụ site n’akpaego ụlọọrụ na-ahụ maka mmanụ gaasị bụ NLNG.
Onyeisi Otu mere nyocha ahụ bụ Bassey Albert Akpan agwala ndị NNPC na CBN ka ha gosi akwụkwọ eji mịpụ ego ahụ.
Asusu Igbo : Ihe ise ị kwesịrị ịma maka Alvan Ikoku